Cat Scratcher, Cat Umthi Scratcher, Cat Toys - Jie Feng
I-Hangzhou Jie Feng Leisure Product Co., Ltd Ngumvelisi oQeqeshayo weeMveliso zePet eChina kwaye ibekwe kwiPingyao Idolophu yaseHangzhou City. Ifektri yaqalwa ngo-2008 kwaye sinamava amaninzi kushishino lwezilwanyana. Into Esiyisukelayo Ngoku Ngaba Uyilo olwahlukileyo kunye nokuGqwesa okungcono kweeMveliso.
Ukutya kwezilwanyana zasekhaya
kwikhadibhodi ikati indlu
Sinelungelo lethu lomenzi ngale nto. Yenziwe ngephepha elinamabala acocekileyo kwaye sibeka iiphedi zokukrwela kokubini ngaphezulu nasezantsi kwento leyo. Ivumba elikhethekileyo lekhadibhodi litsala iikati kakhulu ukuba zidlale ngolonwabo. Imveliso ikwisakhiwo sendibano kunye nevoluyum encinci yokuhamba kwaye inokugcina iindleko zothutho kumthengi. Ngaphezulu, iya kuzisa umthengi ngokwenzekayo xa ugqiba ukudibanisa.
Sinelungelo elilodwa lomenzi wethu ngezi zinto. Yenziwe kwinqanaba le-E1 ye-EF. Senze lo uyilo ekupheleni kuka-2019 kwaye kuvela ingqalelo enkulu kwimiboniso yezilwanyana. Ithengisa kakuhle kakhulu kwi-2020. Senze iimilo ezahlukeneyo kunye nemibala emininzi ukuze abathengi bakhethe, nayo, ikhadibhodi ebunjiweyo iyatshintshwa. Ngaphandle kwesikratshi, songeza into yokudlala kwimouse ukwandisa ukonwaba kweekati. Ukuba unomdla kolu ngcelele, nceda unxibelelane nathi! Singenza uyilo lwesiko kuwe!
MDF ikati yokudlala
Sinelungelo lethu lomenzi ngale nto. Yenziwe kumgangatho ophezulu we-E1 MDF. Sidibanisa ibhola kunye nekhadibhodi edibeneyo kunye. Ikati iyakrwela nokudlala ibhola. Xa kuthelekiswa nephepha lokudlala iphepha, senze iimilo ezininzi zolu ngcelele. Ngaphandle kwezi zintlu zidwelisiweyo, zininzi ezinye iimilo. Ngaphezu koko, iphedi yokukrola embindini inokubuyiselwa endaweni leyo ethetha ukuba le nto yomelele. Umthengi ufuna kuphela ukubuyisela indawo esezantsi engabizi kwaye kulula ukuyiphatha. Ukuba ...
Cage yezirhubuluzi luhlobo lwekhabhathi esetyenziselwa ukukhulisa izilwanyana ezinamanzi. Abathengi banokuhombisa iikhabhathi zabo ngokokuthanda kwabo, kwaye bafake izibane kunye nezityalo ukuze izilwanyana zabo ziphumle ngcono. Sisebenzisa iibhodi ezinobume bendalo kwaye singenza ngokwezifiso ubungakanani obahlukeneyo kubathengi bethu. Sithumele i-cage yezirhubuluzi eYurophu naseMelika, e-Australia kwaye ithengisa kakuhle ngalo lonke ixesha. Wamkelekile umbuzo wakho.
ikati eludongeni kwishelufa SCW08-S
Yenziwe kwinqanaba le-E1 ye-EF. Senze uyilo kwaye safumana imibuzo emininzi kwiWebhusayithi. Itafile yodonga lwati luhlobo lwento yefashoni yasekhaya, enokuvumela ikati ukuba ibenendawo yokudlala. Imodeli emininzi yokwahlula ikulungele ngakumbi ukunyuka kwekati. Ikholamu yentambo ye-hemp inokuvumela ikati ukuba ikrwele iinzipho zayo. Uyilo lukhethekile kwaye alubizi. Ixhaswe kwaye yaxatyiswa ngabathengi abaninzi.
Idilesi:I-2-4 Yangcheng Road,
IPingyao Idolophu, kwiSithili saseYuhang, eHangzhou
Umnxeba:86-187 5823 6742 / 86-178 2683 3264